AccueilSongandinaAIZA NO ALEHA : Piment Café – Behoririka
Raha miara-dia hatrany tamin’ny mpanakanto hafa no nahafantarana azy hatramin’izay, hisedra irery ny sehatry ny Piment Café Behoririka anio alina i Fara Kely. Andriambavilanitra mpanakanto fantatra amin’ny feomangany. Karazana gadona samihafa no entiny amin’io seho io ary ao anatin’izany ireo vazo an-gitara toa ny « Fitia mangina »… Tsy hohadinoina ao anatin’izany koa anefa ireo hira vahiny na hirana mpanakanto hafa nefa efa nitondra ny talentany toa izay niarahany tamin’ny tarika Randrantelo, na nampiarahany feo tamin’i Laza….
Taorian’ny fampiaraha-peo tamin’ny mpanakanto maro, hiaka-tsehatra etsy amin’ny Trass Tsiadana indray i Bodo anio alina ary haneho indray ny talentany amin’ny fahaizana mihira. Ankoatra ireo hirany sy efa nahafantaran’ny maro azy dia hivelatra amin’ny fiangaliana ny sangan’asan’ireo mpanakanto hafa ihany koa i Bodo.
Anisan’ireo tovovavy miangaly ny mozika mihetsika. Hanafana indray ny sehatry ny Jao’s Pub eny Ambohipo anio alina i Arnaah. Mpanakanto malagasy vehivavy fantatra amin’ny fomba fitafy somary mampiseho vatana. Hanakoako eny Ambohipo ireo hira nampalaza sy nahafantarana azy hatramin’izay toa ny « Magneva », « Ngoma ngoma », « Tsy hialako »…
Is’art Galerie – Ampasanimalo
Tafiditra amin’ny fanamarihana ny faha-150 taonan’ny fiaraha-miasa teo amin’i Etazonia sy Madagasikara, ary taorian’ny seho nataony tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna, hanolotra fampisehoana etsy amin’ny Is’art Galerie / La Teinturerie Ampasanimalo anio alina ilay mpanakanto amerikana Kenny Wesley manomboka amin’ny 7 ora hariva. Fotoana andrenesana sy hiainana indray ireo blues, jazz ary soul amerikana.
Mpanao rap vao misandratra, nefa efa manana ny anjara toerany eo amin’ny sehatry ny vazo an-tanàn-dehibe. Mandritra ny fampisehoana ataon’i Kemyrah rahampitso no ampahafantarany indray ary hitondrany an-tsehatra voalohany ny rakikira « Kamy rap », izay ahitana hira 16 miresaka ny lafi-piainana amin’ny ankapobeny. Mpanakanto maro no hanotrona azy amin’ny fampisehoana toa an-dry Sckariota, Double’NN, Arione Joy, Rak Roots, Nazarene, Jiol’Ambup’s, Zazaluck, Mista, Elita ary Willy West.
Mitohy hatrany ireo fampisehoana ataon’ny tarika Mahaleo ao anatin’ny fankalazan’ny tarika ny faha-45 taonany. Etsy Antsahamanitra indray no fotoana hifanomezan-dry Dama sy ny tariny amin’ireo mpankafy azy ny alahady tolakandro izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany. Ankoatra ireo hira tsy afa-miala amin’ny fampisehoana ataon’ny tarika Mahaleo dia hisy ireo hira tsy nentina tamin’ny fampisehoana farany tetsy Mahamasina no ho kaloin-dry zalahy amin’io andro io.
Sambany eto Madagasikara ny hisian’ny « sinema an-tsehatra ». Ilay tantaram-pitiavana « Safidim-pitiavana » no hisantarana izany ny alatsinainy 1 Mey izao etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Ho toa ny miatrika mivantana sy ao anatin’ny sarimihetsika ny mpijery. Ankizy 11 avy ao amin’ny FJKM Ambohipo no hitondra an-tsehatra ny tantara izay maneho fifankatiavan’ny malagasy roa nifankahita tany Kanada.
La Gare – Soarano
Aharitra telo andro, manomboka anio ary hifarana ny alahady izao ny « Festival Libertalia 2017 ». Mpanakanto manodidina ny 15 no hifandimby hiaka-tsehatra ao anatin’ireo telo andro ary hitondra karazana kadona samihafa toa ny salegy, kilalaka, ny funk, rock… Hisantatra izany anio ry Voots kongregation, Minah, Christel Ratri art Tsiliva. Hanohy izany kosa rahampitso ry Silo, Mounawar mpanakanto kaomoriana monina any La Réunion, Samoëla ary Teta. Hamarana ny hetsika kosa ny alahady izao ry Behind the mask, Now Mady, Dizzy Brains, Jaojoby ary The Inspector Cluzo. Amin’ny sehatra hafa kosa no ahitana an-dry Saramba, Mem’s familly ary Edgard Ravahatra.